Izindaba - Uhlelo "Lweshumi Nanye Lweminyaka Eyisihlanu" lukaGuizhou lutshale izigidigidi ezi-5 ukuxazulula inkinga yamanzi okuphuza kubantu basemaphandleni abayizigidi eziyi-10.6
Ukubuka konke kwenkampani
Uchungechunge lwamapayipi wamandla
Amapayipi okuhambisa amanzi namapayipi endle
Ukwakhiwa Pipe Series
Uchungechunge lwamapayipi wokuxhumana
Uchungechunge lwamapayipi okuhambisa amanzi
Ipayipi lenhlanganisela yakamuva yensimbi-iplastiki
Uchungechunge olukhethekile lwamapayipi
Uhlelo “Lweshumi Nanye Lweminyaka Eyisihlanu” lukaGuizhou lutshale izigidigidi ezi-5 ukuxazulula inkinga yamanzi okuphuza kubantu basemaphandleni abayizigidi eziyi-10.6
Esizeni sokwakhiwa kwe- “Anda New Long-distance Pipeline Water Conveyance Project” eJinsha County, izinhlobo ezahlukahlukene zemishini yokwakha zimatasa endaweni yomthombo wamanzi nasendaweni yokubeka amapayipi ukuqinisekisa ukuthi iphrojekthi enkulu isiphothulwe ukuphela unyaka.
Iphrojekthi enkulu kunazo zonke yokuhambisa amanzi emapayipini amabanga amade emaphrojekthi okuphepha amanzi asezindaweni zasemakhaya esifundazweni saseGuizhou, uma isiqediwe, ingaxazulula inkinga yokuphepha kwamanzi okuphuza yabantu abangama-69 900 e-Anluo Township, eDatian Township, naseXinhua Township yaseJinsha County.
Amaqabane avela eMnyangweni Wezokuphuza Abantu eMnyangweni Wezinsiza Zamanzi athi kunamaphrojekthi angaphezu kuka-100 abantu abaphuzayo asakhiwa kanjena.
Ngesikhathi “soHlelo Lweminyaka Eyishumi Nanye Lweminyaka Emihlanu”, yize kwakubekwe abantu abayizigidi eziyisi-6.15 kuphela “Ohlelweni Lokuqeda Ukoma”, empeleni, kwakukhona abantu abayizigidi eziyi-10,6 basemaphandleni abanamanzi aphuzwayo esifundazweni, bevalelisa emanzini okuphuza ngenxa ukuqaliswa kwamaphrojekthi ahlukahlukene okuphuza kwabantu.
Ukusuka ngo-1996 kuya ku-2004, isiFundazwe saseGuizhou sisebenzise izigaba ezimbili ze- “Desire Project” ne- “Poverty Relief Project”, ezisize abantu basemakhaya abangaphezu kwezigidi eziyi-18 esifundazweni saseGuizhou ukuthi “bomele”, kodwa inhlolovo nokuhlola okwenziwe ngo-2005 kukhombise ukuthi izigidi ezingama-23 abantu basemakhaya esifundazweni saseGuizhou Abantu bahlushwa ngamanzi okuphuza angaphephile.
Kusukela ngo-2006, ukwakhiwa konjiniyela bokuphepha kwamanzi okuphuza emaphandleni eGuizhou sekuqalile. “Utshalomali lwamazinga amathathu ngokuhlanganyela” selwenze uchungechunge lokuxhaswa ngemali lwamaphrojekthi okuqinile, okwenza isikhathi “soHlelo Lweminyaka Emihlanu” lube yisikhathi esikhula ngokushesha kakhulu futhi esisebenza kangcono emsebenzini wokuphepha kwamanzi okuphuza emaphandleni esiFundazweni saseGuizhou.
Kulindeleke ukuthi kuphele lo nyaka, isifundazwe sizotshala isamba esingu-4.944 billion yuan kumaphrojekthi wamanzi okuphuza ezindaweni zasemakhaya. Phakathi kwabo, uhulumeni omkhulu utshale imali engu-3.012 billion yuan, futhi amalungiselelo ezezimali ezingeni lesifundazwe lama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.546 azuzise ukutshalwa kwemali okuqoqayo kwabalimi kanye nemali ehliselwe abasebenzi engaphezulu kwezigidi ezingama-300 zama-yuan.
Njengamanje, isiFundazwe saseGuizhou senza “uHlelo Lweshumi Nambili Lweminyaka Eyisihlanu” lokuhlela ukuphepha kwamanzi okuphuza ezindaweni zasemakhaya esifundazweni, esechithe futhi yaqalisa umsebenzi wokuphepha kwamanzi okuphuza abantu abasemaphandleni abayizigidi ezimbili kuya kwezi-3 esifundazweni kusukela ngo-2008 kuya ku-3. 2012 unyaka ngamunye, futhi ukwenze unyaka owodwa kusengaphambili ukwakhiwa kwephrojekthi ngayinye kanye nohlelo lokuqalisa jikelele.
Isikhathi Iposi: May-21-2020
Indawo Yokutshalwa Kwezimali yaseFuhong Yuanhong, esifundazweni saseFujian
“ECHINAPLAS 2012 ″ E-Asia ...
Ibanga lokuqala laseChina “i-ho-ho ...
"Eyishumi nesishiyagalolunye yeminyaka emihlanu P kaGuizhou"
Okusha ipayipi ipulasitiki umkhakha China sika ...
Siyakuhalalisela ngemfudumalo ngoFujian Shengyang ...